भिडियो | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
access_time4 minutes ago
भारतबाट आयातीत विषाक्त रसायनयुक्त माछाको बिक्रीमा रोक
access_time42 minutes ago
काठमाडौंमा रेल आएको हाम्रै जीवनमा देख्न पाउनेछौं : प्रचण्ड (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केही वर्षभित्र चीनको ल्हासाबाट काठमाडौंमा रेल आउने दावी गरेका छन् ।
सय वर्षका तन्नेरी सत्यमोहन, यसरी मनाइयो जन्मदिन (भिडियोसहित)
शताब्दी पुरुष access_time1 year ago
कला र संस्कृतिका धरोहर वाङ्ममय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी आजदेखि ९९ वर्ष पूरा गरी १०० वर्षमा टेकेका छन् ।
सन्दीपसँग नेपाली क्रिकेटबारे सचिन तेन्दुल्करको जिज्ञासा
काठमाडौं । तेन्दुल्करले नेपाली क्रिकेटलाई ‘वेस्ट विसेस’ पनि दिनुभएको थियो ।
कम अवसर पाएँ, तै पनि आफ्नो प्रदर्शनमा खुसी छु : सन्दीप
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेलेर स्वदेश फर्किएका नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले यस पटक आफूले कम अवसर पाएको बताएका छन् । यद्यपि, उनले प्राप्त अवसरमा गरेको आफ्नो प्रदर्शनमा भने खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
आजको नागरिक खबर
काठमाडौं उत्रिएपछि सन्दीपले भने 'जहाजका कारण सातो गयो' (भिडियोसहित)
'सातो गयो । किन भने चेन्नईबाट दिल्ली आउँदा पनि मलाई अहिलेसम्मकै खराब अनुभूति भएको थियो । आज त्यो भन्दा पनि खराब रह्यो । आशा छ अब त्यस्तो नहोस् । रनवेबाट जहाज फर्किएको थियो ।'
प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनाउँछौं : देउवा (भिडियोसहित)
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको दाबी गरेको छ ।
नर्समाथि श्रम शोषण गर्ने अस्पताललाई कारवाही हुन्छ : मन्त्री विष्ट (भिडियोसहित)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नर्सहरुमाथि श्रम शोषण गर्ने अस्पतालहरुमाथि कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
टोले गुण्डा नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको उद्घोष(भिडियोसहित)
आर्थिक, सामाजिक र साईबर अपराध नियन्त्रणका लागि फरक फरक टोली बनाएर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
७६ वर्षीया नर्स विष्णु दिदीको ५७ वर्षको नर्सिङ पेशा (भिडियो कुराकानी)
विश्व नर्सिङ दिवस access_time1 year ago
ताप्लेजुङमा जन्मिएकी राई ५७ वर्षदेखि निरन्तर नर्सिङ पेशामा आवद्ध छिन् । उनले सन् १९६२ मा ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ शिक्षा हाँसिल गरिन् । पढाइ सक्दासाथ उनले नर्सिङ यात्रा सुरु गरिन् ।
मुलुकको समृद्धिका लागि साहित्यले मार्गप्रसस्त गर्छ : मन्त्री पुन (भिडियोसहित)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले कवि, साहित्यले बोलेको विद्रोहलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सभामुख महराको कविता : तिम्रो मासुको भतेर लगाउन षड्यन्त्र रचिँदैछ...(भिडियोसहित)
सभामुख कृष्णबहादुर महराले मुलुकमा केही तत्त्वहरु अझै हिंसा भड्काउन लागिपरेको बताएका छन् ।
धार्मिकस्थलको विकास गरी पर्यटक आगमन बढाउनुपर्छ : नेता खनाल (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता झलनाथ खनालले नेपालका धार्मिकस्थलको विकाससँगै पर्यटकको आकर्षण बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बाँदरले महिलालाई नै किन गर्छ आक्रमण ? (भिडियोसहित)
बाँदरले शरीरबाट निस्कने विभिन्न रासायनिक पदार्थ थाहा पाउने र महिलाहरु वयश्क तथा रजश्वला भएको गन्ध पनि थाहा पाउँछ । त्यसैले उमेर पुगेकालाई कुनै बद्मास खालको भाले बाँदरले आक्रमण गर्न सक्छ ।
लेख्नलाई १७ वर्ष अर्ध–भूमिगत : क्रान्ति सुब्बाले के लेखे ? (भिडियो)
साहित्य सम्वाद access_time1 year ago
मानिसको आआफ्नो लक्ष्य हुन्छन्, उद्देश्य हुन्छन् । ती लक्ष्यमा पुग्न र उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति मानिसले अनेकन प्रयत्नहरु गर्छन् ।
के तपाईलाई बढी टाउको दुख्छ ? यसबाट बच्न के गर्नुपर्ला ? (भिडियो कुराकानी)
स्वास्थ्य सुझाव access_time1 year ago
के तपाइँलाई अत्यधिक टाउको दुख्छ ? यदि दुख्छ भने तपाईँलाई माइग्रेन भएको पनि हुनसक्छ ।
अध्यक्ष देवता होइन, खराब भन्न पाउनु पर्छ (भिडियो कुराकानी)
नेताहरूलाई विश्वास गरेर आफूहरूले गल्ती गरेको भन्दै पराजुलीले आफ्नो पार्टीलाई पनि आरोप लागेको बताएका छन् । आफूहरूले उठाएका एजेण्डामा नेतृत्व सकरामत्मक भएकाले सम्बोधन हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेतृत्व कुनै पनि देवता नभएको बताए ।
नेपालमा कफी पर्यटनको सम्भावना (भिडियोसहित)
अनुसन्धानकर्ताहरुले नेपालमा कफी पर्यटनको सम्भावना रहेको औंल्याएका छन् ।
ट्याक्सी भाडा बढाउन व्यवसायीको माग, चाँडै भाडा बढाउने सरकारी आश्वासन (भिडियोसहित)
ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालकहरुले ट्याक्सीको भाडा दर समायोजन गर्न सरकारलाई दवाव दिन सुरु गरेका छन ।
बजेटमा के-के कुरा समेटिन्छन् ? (भिडियोसहित)
भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने तथा पुरातात्विक संरचनाको निर्माण तिब्र बनाउने , कर प्रशासनमा सुधार, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा करको सदुपयोग, अन्तराष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको समतामुलक विकास हुने ढंगले स्रोत साधनको बाँडफाँड गरिने भएको छ ।
'महेन्द्रले प्रयोग गरेको जय नेपाल प्रयोग गर्ने कांग्रेसले मेरो सरकारको विरोध गर्ने ? ' (भिडियोसहित)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘मेरो सरकार’को विषय निकालेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले निहँु खोज्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
पुनर्विवाहको आविष्कार सीताको इच्छाअनुसार: प्रचण्ड (वर्षगाँठको भिडियोसहित)
'पत्नी सीताको निम्ति माया, प्रेम र हौसलाको आवश्यकता छ । अघिल्लो वर्षदेखिनै सीताले अर्को वर्ष हाम्रो विवाह भएको ५० वर्ष पुग्छ । परम्रागत ढंगले विवाह गर्ने भन्ने उनको प्रस्ताव थियो । यो आविष्कार मेरो होइन ।'
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको ५०औं वर्षगाँठ यस्तो देखियो (भिडियो)
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ५०औं वैवाहिक वर्षगाँठको दृश्य रोचक देखियो । पारिवारिक रुपमा आयोजना गरिएको वर्षगाँठ कार्यक्रममा ठूलो भीड लागेको छ । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा आयोजित ५०औं वर्षगाँठ कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ, मन्त्रीहरु, नेकपाका नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पुगेका छन् ।
तनावग्रस्त बिहिवारको बौद्ध (फोटो र भिडियोसहित)
आईतवारदेखि चुच्चेपाटी बौद्ध जोरपाटी सडकमा कालोपत्रे गर्ने सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ । स्थानीय व्यवसायीको अगुवाईमा बिहीवार बिहानदेखि सडक अवरोध गरेर प्रदर्शन भएको थियो । सडक मर्मत नभएको भन्दै स्थानीय र व्यवसायीले बिहान ८ बजेदेखि सडक अवरुद्ध गरेपछि बौद्ध क्षेत्र झण्डै दुई घन्टा तनावग्रस्त भयो ।
काँग्रेसमा महाधिवेशन सार्ने चलखेल शुरु भयो ! (भिडियोसहित)
नेपाली काँग्रेसका युवा नेता पौडेलले १० महिनाभित्र अधिवेशन गर्नुपर्नेमा नेतृत्वले त्यस अनुसार काम नगरेको बताए । तल्लो तहसम्म जाने भनिएपनि तल्लो तहमा पार्टीका संरचना नभएकाले कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले पार्टीभित्र आफूहरुले फेरि पनि त्यसको उत्तर खोज्ने जानकारी दिए ।
बजेटमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकको सुझाव (भिडियोसहित)
नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भियतनाम र कम्बोडिया प्रस्थान, यस्तो छ भ्रमण तालिका (फोटो र भिडियो)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भियतनाम र कम्बोडिया प्रस्थान गर्नु भएको छ ।
रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा गावहालमा (भिडियोसहित)
ललितपुरको गाबहालमा बिहिवार रातो मच्छिन्द्रनाथको दर्शन गर्नेहरुको भीड लागेको थियो । घरघरबाट आएका नेवारी समूदायले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथमा पूजाआजा, भजर्नर्कीतन गरी आफ्ना चेलीबेटीहरुलाई सोही ठाउँमा दक्षिणा दिने गर्दछन ।
सडक पिच गर्न माग गर्दै बौद्धमा विरोध प्रदर्शन (फोटो र भिडियोसहित)
आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले तुरुन्तै सडक कालोपत्रे गर्न माग गरेका छन् ।
प्रचण्डको आह्वान- शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गरेर विश्वलाई सन्देश दिऔं (भिडियोसहित)
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सक्दो सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक रंग बढी देखियो : डा. भट्टराई (भिडियोसहित)
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक रंग बढी देखिएको टिप्पणी गरेको छन् ।
भारतले यसरी निल्न खोज्यो नेपाललाई: नागरिकतासम्बन्धी विज्ञ भण्डारी (भिडियोसहित)
नागरिकखबर डटकमसंगको कुराकानीमा भण्डारीले विधेयक पारित गराउनका लागि भारतले नेपालका नेतालाई दबाब दिएको र नेताहरु निरिह बनेको आरोप लगाए । उनले नेपालको तराईका जिल्लाबाट भारतको बिहार, यूपी र पश्चिम बंगालका मान्छेलाई यसअघि पनि हजारौंको संख्यामा नागरिकता दिएको दावी गरेका छन् ।